Chelsea oo ku fikiraysa inay iska iibiso Armando Broja | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Chelsea oo ku fikiraysa inay iska iibiso Armando Broja
Chelsea ayaa ku fikiraysa inay iibiso Armando Broja sanadkan.
Daily Express ayaa sheegaysa in aysan sir ahayn in Southampton ay doonayso in ay Broja ka saxiixdo heshiis joogto ah iyada oo ay wadahadalo horay u socdeen laakiin kooxaha kale ee Premier League ayaa iyaguna bilaabay in ay muujiyaan xiisaha.
Dalabyada ayaa la filayaa inay miiska soo saaraan muddo ku dhow shan bilood, taasoo la micno ah inay Chelsea ku qasban tahay inay hagaajiso qorshaheeda ku aaddan xidigan iyadoo la filayo inuu dhaco kulan u dhexeeya kooxda iyo wakiiladiisa.
Thomas Tuchel ayaa si cad u jecel Broja, kaasoo soo jiitay xilli ciyaareedkii hore ee Cobham, laakiin weeraryahanka ayaa doonaya inuu si joogto ah u ciyaaro oo uu sii wado horumarkiisa kubada cagta Premier League .
Amaah kale ayaa wali laga yaabaa inay ku jirto qorshaha laakiin iyadoo tiro ka mid ah kuwa doonaya ay u muuqdaan inay diyaar u yihiin inay lacag weyn ku bixiyaan xiddiga heerka caalami ee dalka Albania, Chelsea ayaa weli laga yaabaa inay lacag kaash ah ku hesho ciyaaryahan aan u badneyn inuu noqdo dooqa koowaad ee galbeedka London.
Photo/AFP Manchester United ayaa Talaadadii maanta dib u furtay xarunteedii tababarka ee Carrington ka dib markii uu ka dillaacay coronavirus kaasoo ku qasbay...
Deg Deg Qaramada Midoobay oo Digniin Kama Dambeyn ah Siiyay Farmaajo...
Ciidamada Puntland oo weeraray wasiirka arrimaha dibada DF, dhaawacayna nabaddoon
Madaxweyne Xasan Sheekh ma wuxuu raadinaya Ra’iisul wasaare maqaar saar ah?
Mucaaradka oo Ku dhawaaqaya Guddi Doorasho, Rooble oo ka aamusan Cabashada...
Maamulka G/BANAADIR oo DIGNIIN culus soo saaray
Shirka Golaha Wadatashiga oo caawa dib u furmay + Sawirro
FARMAAJO oo war kasoo saaray weerarkii maanta ee Villa Hargeysa iyo...